राज्यको ढुकुटीबाट चिया-नास्तामै २० अर्ब खर्च – NepalajaMedia
September 7, 2020 179
पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो फाल्तु खर्च हो, यसलाई रोक्नुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका कोइराला भन्छन्, ‘शीर्षकअनुसार खर्र्च गर्नुपर्छ। विविधका नाममा यसरी जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
Nextमन्त्रीबाट राजिनामा नदिदैँ प्रधानमन्त्रीका प्रिय खतिवडालाई बम्पर उपहार !
प्रयोग भएको मास्क जथाभावी विसर्जनः संक्रमणको जोखिम बढ्दो
कसरी पाउने भगवानको आशीर्वाद ? गर्नुहोस् यी ४ कार्य !